ကောငျးဘဝတိုက်ရိုက်တွေ့ကြုံ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ယခုအပတ်ပယ်ကောငျးဘဝအသက်တာခရီးစဉ်ကန်ဘော! သငျသညျအနီးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်သည့်ရက်စွဲထွက်ရှာမည်. ကျနော်တို့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ် Minneapolis, မီချီဂန်, ဗာဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်, Nashville, Orlando တွင်, နှင့် Dallas မြို့. ပိုများသောရက်စွဲများအဖြစ်ကောင်းစွာမကြာမီဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်! လက်မှတ်တွေများအတွက်လင့်ခ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ်သွားပါ ReachRecords.com/events.
Sonu • ဒီဇင်ဘာလ 9, 2014 တွင် 10:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, numerous epetrxs have my personal personal simple awareness which in turn the majority of will be obtained withaimpulse plus still left from your bathroom drawer.It’s my opinion of which participating in violent video gaming may possibly raise physical violence if only as some other elements can be found.Indicating people only shell out to the net system rather than with all the phone by itself.